Mavhesi eBhaibheri Pane Zvepamusoro: Kukwegura -> Hupenyu
Kana munhu asingachengeti hama dzake, zvikuru vemhuri yokwake, munhu akadaro atorasa chitendero chake uye akatoipa kupinda asingatendi.
Nezvo hatirasi mwoyo. Kunyange tavakuchembera, umunhu hwedu hokunze; hwomukati huri kutovandudzwa zuva nezuva,
Rangarira mazuva aye ekare, uyeuke makore aye ezvizvarwa nezvizvarwa; bvunza baba vako, vachakurondedzera, ubvunzewo vechikuru-chikuru, vachakutsanangurira.
Mosesi akafa ava namakore zana namakumi maviri. Muviri wake wakanga uchakagwinya, maziso ake achinyatsoona zvakanaka.
Usabvunze kuti, “Ko seiko mazuva akare akanga akanaka kupfuura anhasi uno? Mubvunzo wako haubvi muungwaru.”
“Remekedza baba naamai vako, kuti mazuva ako awande munyika yauri kupiwa naTenzi, Mwari wako.
Tenzi akati, “Handichabvumiri kuti mweya wangu uri mumunhu ugare maari nokusingaperi nokuti munhu ndowenyama, anofa. Saka haachagara panyika nguva inodarika zana ramakore rina makore makumi maviri.”
Abhurahamu akanyatsochembera zvake zvokugutsikanawo ndokubva azoenda zvake kwakaenda vamwe vokwake.
Anopa simba munhu anenge arukutika, anenge asina simba anomusimbaradza.
kusvikira pamunochembera, ndini, kusvikira muchene musoro ndini ndinokutakurai. Ndini ndinosika, ndini ndinochengeta, ndini ndinotakura, ndini ndinonunura.
Uchasvika kuguva kwako wanyatsokwegura zvako. Sezvinoita tsanga yechisote chembesanwa inouya pokupurira panguva yayo.
 Ungwaru huri muna vakura kunzwisisa kunouya nokuendadzana kwenguva. “Asi Mwari ndiye ano ungwaru nesimba ana mazano nokunzwisisa. Akapaza, hapana angavake akazaririra munhu, hapana angazarure. Akamisa mvura, kunooma, akaituma inoita murove. Iye ane simba noungwaru, vanonyengedzwa navanyengedzi vacho vose ndevake. Anotorera makurukota ungwaru hwavo, vatongi achivapazanisa musoro. Anosunungura zvakasungwa namadzimambo achivasunga netambo muchiuno. Anotorera vapristi ungwaru, vakuru vakuru achivabvisa pazvigaro. Anotorera mazano vanovimbwa navo, vakuru vakuru achivatorera kunyatsoona zvinhu nemazvo.
Ndati regai vakura ndivo vataure vane makore aendedzana vape ungwaru.
“Mushure mezvo zvichazoitika kuti ndichadururira Mweya wangu pamusoro pavanhu vose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita, vakwegura venyu vacharotswa hope, vechidiki venyu vachaona zviratidzo.
“Unofanira kuremekedza vachena musoro, ukudze harahwa nechembere, uchitya Mwari wako, ndini Tenzi ndinodaro.
asi pamusana porudo, zviri nani kuti ndiite zvokukukumbira, iyeni Pauro harahwa kudai uyewo musungwa akasungirwa Kristu Jesu.
Musandirase kana ndakwegura musandifuratire kana ndapera simba.
Saizvozvo kusvika pakukwegura kwangu napakuchena musoro, Mwari musandirase kusvikira ndaparidza simba renyu kuzvizvarwa zvose zvichauya.
Nyama yangu nemwoyo wangu zvingakundike zvazvo asi Mwari ndiye simba rangu uye ndiye mugove wangu nokusingaperi. Nokuti vanogara kure nemi vanoparara
 Makore oupenyu hwedu makumi manomwe kune vakasimba vanoita makumi masere asi akanaka acho inongova nhamo namatambudziko, haatani kupera, isuwo tobva tobhururuka toenda. Ndiani anoziva panosvika hasha dzenyu. Hasha dzenyu dzakangoenzana nokutyisa kwenyu saka tidzidziseiwo kuverenga mazuva edu kuti tingwarire.
Ndichamugutsa noupenyu hurefu ndigoita kuti aone ruponeso rwangu.
Vazukuru ndivo ndaza yavakwegura uye vabereki ndiyo mbiri yavana.
Mbiri yamajaya iri musimba ravanaro kuremekedzwa kwavakwegura kuri mukuchena musoro.
Teerera baba vako vakakubereka uye usashore amai vako kana vakwegura.
Ndakamboona munhu wakaipa ano mukundo akati dzuu kwazvo somusidhari weRebhanoni.
1 Makoronike 29:28
Akanyatsochembera akakwegura ndokuzofawo zvake aine upfumi nomukurumbira, mwanakomana wake Soromoni akatonga panzvimbo yake.
1 Madzimambo 3:14
Kana ukafamba mumakwara angu ukachengeta mirao nemitemo yangu sezvaiita baba wako Dhavhidhi ndichakupa upenyu urefu.”
Anokugutsa nezvinhu zvakanaka upenyu hwako hwose achikugwinyisa zvokuti unoramba uri mudiki segondo.
Taurira vakadzi vakuru kuti vave vakatsiga vasina makuhwa kana kuva varanda vedoro; vanofanira kudzidzisa zvinhu zvakanaka, nenzira iyoyo
 Usatsiure munhu mukuru zvehasha asi nyatsotaura naye sababa, varume vadiki vabate savanun'una vako, vakadzi vakuru savanamai vako navakadzi vechidiki sehanzvadzi dzako pasina kana zvokumbotsaudzira mune zvoutsvene.
 Kukurumbidzai hakuchabvi pamuromo pangu uye ndichaswera muswere wose ndichikupai mbiri. Musandirase kana ndakwegura musandifuratire kana ndapera simba.
 Nyika yedu isu iri kudenga. Ndiko kwatinotarisira kuti kuchabva mununuri Tenzi Jesu Kristu. Ndiye achasandura muviri wedu uno wenhando achiuita semuviri wake wembiri nesimba rinomugonesa kuisa zvinhu zvose pasi pake.
 Chimboteererai kwandiri munzwe, imi vemba yokwaJakobho imi mose chitsama chavanhu vokwaIsiraeri chakasara, imi vandakatakura kubvira pakuberekwa kwenyu. Ndakakutakurai kubvira muchiri mudumbu kusvikira pamunochembera, ndini, kusvikira muchene musoro ndini ndinokutakurai. Ndini ndinosika, ndini ndinochengeta, ndini ndinotakura, ndini ndinonunura.
 Vakarurama vanobudirira sokukura kunoita murara uye vanokura somusidhari wokuRebhanoni. Vanosimwa muimba yaTENZI, vanobudirira mumipanda yaMwari wedu. Vanobereka michero ivo vakwegura zvavo, vanoramba vari vanyoro vakasvibira kuratidza kuti TENZI ari pachokwadi ndiye dombo rangu maari hamuna chakaipa.
 Yeuka musiki wako uchiri muduku, mazuva akaipa asati asvika, mazuva auchazoti, “Handiafariri asati asvika;” zuva nechiedza nomwedzi nenyenyedzi zvisati zvasviba makore asati adzoka mushure mokunaya kwomvura; pazuva rinenge vachengeti vepamba vongweda kutya majaya akasimba okombama, vokukuya vorega nokuti vanenge vava vashoma vachiti kana vatarisa napahwindo maziso anoona rima; makonhi ari munzira izvozvo ogara akazarirwa ruzha rwezvigayo rwavakuderera, munhu ava kumutswa nokuchema kweshiri dzokutanga panguva yakunenge kuimba kwaderera, kukwira mukwidza kwavakutyisa kufamba chaiko kwavakutyisawo iwo musoro, muarimondi zvawo kuchena maruva zvino wava mhashu zvayo kuzvova napasi, havi dzose dzapera iwe wavakuenda kumusha wako wokusingaperi vokuchema vakafa vavakuunganidzana mumigwagwa. Tambo yesirivha isati yadambuka ndiro yendarama isati yapwanyika chirongo chisati chaputsika patsime. Ivhu rodzokera kunyika sezvarakanga riri mweya wodzokera kuna Mwari akamboupa.